SIDA LOO KARIYO MALAB BOCORKA AH, SIYAABO WAXTAR LEH IYO HALABUURKA SHEYGA - DAAWADA DADWEYNAHA
Malabkii Pumpkin, oo muddo dheer loo yaqaanay hantidooda faa'iido leh, waxay ahayd mid ka mid ah qarsoodiga ah ee dheer-dheer ee Caucasus. Wuxuu noqday mid calaamad u ah caafimaadka iyo awood jireed. Maanta, dad badan ayaa ku soo laabanaya asaasiga, iyagoo isticmaalaya sheygan si loo bogsiiyo.
Ma taqaanaa? In Maraykanka, malab bocorka ah sida caadiga ah macaan macaan iyo cocktails.
Waa maxay malab bocorka ah iyo sidee ayaa loo qodaa
Malabka Pumpkin waxaa loo sameeyay by bees ku saleysan miisaanka ubaxa nectar. Waxay ka mid tahay noocyada caanaha iyo dhifka ah ee malabka, maadaama aan ka badnayn 30 kg ee badeecadda la dhammeeyey la heli karo xilli kasta hektar geedka. Waxay leedahay midab qurux badan, qani ah, midab khafiif ah, caraf udgoon iyo dhadhan gaar ah, oo xusuusta qaraha. Waxay leedahay qaab jilicsan. Iyadoo ay ugu wacan tahay yaraanta iyo qiimaha sare ee badeecadani, dad badan ayaa bilaabay inay ka fekeraan sida loo sameeyo malab bocorka ah ee guriga iyada oo aan shinni ah.
Sida loo helo malab aan shinni ahayn
Cunto qaadashada sameynta malab bocorka ah waa mid fudud. Ka hor intaadan sameynin malab bocorka ah, waxaad u baahan tahay inaad karsato oo keliya miraha bisil iyo sonkorta. Pumpkin waa in si fiican loo dhaqo oo la qalajiyaa. Kadibna waa inaad si taxadar leh u gooysaa hunqaacda, adoo ka saaraya dhamaan hilibka iyo lafaha.
Waxay weli ku daboolaysaa bocorka leh sonkorta, xiro daloolka sare ee gooyaa, ku rid digsi iyo ka bax 10 maalmood meel qabow. Inta lagu jiro waqtigan, dareere macaan ah ayaa soo baxaya gudaha. Waa in lagu shubaa weel nadiif ah. Tani waa qaabka ugu fudud ee lagu sameeyo malab bocorka.
Dabcan, ee dhadhanka iyo guryaha, daawooyinka, wax yar bay ka yartahay shinni, laakiin waxay noqon doontaa xal aad u fiican oo loogu talagalay kuwa runtii sida loo sameeyo malab bocorka ah. Sidoo kale, halkii aad ka qaadan lahayd sonkor, waxaad qaadi kartaa malab nooc kale ahna ku daadi balka.
Halabuurka kiimikada ee malab bocorka ah
Ka hor inta aadan samaynta malab, waxaa lagama maarmaan ah in la baro Waxyaabaha kiimikada. Qodobbada waxtarka leh ee badeecaddu waxay u sabab u tahay faytamiinada B, A, C, nicotinic acid iyo walxaha raadadka sida potassium, kalsiyum, silicon, cobalt, birta, naxaas.
Ma taqaanaa? Badeecada waxaa ku jira vitamin T (B11) dhif ah, taasoo kor u qaadeysa dheef-shiid kiimikaad.
Faa'iidooyinka iyo waxyeelooyinka malabiga bocorka: malab bocorka ah ayaa faa'iido leh
Malabka Pumpkin wuxuu leeyahay tiro ka mid ah guryaha daawooyinka:
fududeeyaa dheef-shiidka cuntada culus iyo kuwa aan caadiga ahayn;
wuxuu kor u qaadaa burburka dufanka, sidaas darteed - miisaan lumis;
waxay ka nadiifisaa maraakiibta dhiiga ee kolesteroolka;
waxay ka saartaa jajabyada iyo sunta;
waxay sahlaysaa gobolka suntan kala duwan;
waxay ka caawisaa lalabbada iyo qalafsanaanta;
wuxuu yareeyaa kiimikada casiirta caloosha. Marka caloosha iyo boogaha ay si taxadar leh u isticmaalaan, qaybo yaryar;
wuxuu kobciyaa maskaxda sababta oo ah content sare ee gulukooska;
waxay gacan ka geysaneysaa in la xakameeyo shaqada muruqyada wadnaha;
wuxuu leeyahay antimicrobial, anti-bararka, guryaha bakteeriyada, sidaas darteed waxaa loo isticmaalaa daaweynta hargabka;
loo isticmaalo daaweynta cudurada kelyaha iyo beerka;
wuxuu leeyahay saameyn yar oo jilicsan;
Sababtoo ah feejignaanta sare ee fiitamiinada waxay siinaysaa tamar iyo kor u qaadista maareynta, waxay xoojisaa nidaamka difaaca jirka.
Waa muhiim! Malabka Pumpkin wuxuu ku jiraa xaddi badan oo bir ah, sidaas darteed waxay keeni doontaa faa'iidooyin aan faa'iido lahayn ee daaweynta dhiig-yaraan, oo ay ku jiraan carruurta iyo haweenka uurka leh.
Marka loo isticmaalo tiro macquul ah, sheyga ayaa gabi ahaanba aan wax dhib lahayn.
Isticmaalka malab bocorka ah ee daawada dhaqanka, cuntada ugu fiican ee daaweynta guriga
Waxaa jira siyaabo badan oo loo qaato malab bocorka leh faa'iidooyinka caafimaadka. Habka ugu fudud ayaa ah in la isticmaalo labo qaado oo badeecada ah maalin kasta, oo loo qaybiyo dhowr jeer. Waxaad kaloo macaan kartaa shaaha iyo shaahyada dhirta. Malab ah Pumpkin - beedka dhabta ah ee dhabta ah. Cagaarshow, waxaa lagula talinayaa in lagu daro jiis yar oo barxan leh oo lagu qiyaaso 1:10. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa buug-yarahan soo socda ee daaweynta: 1 tbsp. l bogsashada xawaashka (yar yar, rootweed, nettle) u jiifaan weel 0.5 litir ah, ku shub biyo karkaraya oo ka bax inaad u foorno habeen. Qaado 3-4 jeer maalintii hal galaas ah, ku daray 1 tsp. malab bocorka ah. Malabka boombaladu wuxuu ka badan yahay waxtar u leh dadka qaba cudurrada kale ee beerka. Mishiinka hilibka ayaa ku shub 0.5 litir oo biyo ah karkaraya. Ka dib qaboojinta, ku dar 2 tbsp. l malab bocor iyo 1 tsp. liin. Waxaad isticmaali kartaa xayiraad la'aan.
Sida loo kaydiyo malab bocorka
Waxaa fiican inaad ku kaydiso malab bocorka qaboojiyaha, qolka hoose, balakoonka glazed ama meel kale oo qaboow. Si ay u sii dheeraato, sheyga waa la kariyaa si joogta ah, laakiin isla markaa waxay yareyneysaa qiyaasta nafaqooyinka.
Malabka Pumpkin: ka hortagga
Marka loo isticmaalo malab bocorka dhexdhexaadka ah waxay keeni doontaa faa'iidooyin kaliya.
Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad ka baxdid marka:
acidic hooseeyo caloosha;
sonkorowga (waxaa ku jira sonkor badan);
dareen-celinta xasaasiyadda alaabada;
cudurrada kalyaha ee joogtada ah.
Waa muhiim! Si looga hortago ilkaha ilkaha, dhakhtarrada ilkaha waxay ku talinayaan in ay ilkahaaga nadiifiyaan ama ugu yaraan ku luqluqaan afkaaga mar kasta isticmaalka malab bocorka ah.
Inkasta oo ay jiraan waxyaabo badan oo faa'iido leh, ka hor inta aan la cabbin malab bocorka ah, waxaa fiican in lala tashado dhakhtarkaaga.